I-TV-box nVidia Shield TV Pro 2019: isibuyekezo, imininingwane | TeraNews.net
umbhali Nikitin Eugenius Kushicilelwe ku 23.11.2019
Impi emakethe yamabhokisi asetheleni phezulu ayipheleli. Ngenkathi izinhlobo ezimbili zamaShayina u-Beelink no-UGOOS besilwa enkundleni yemidlalo, inkampani yaseMelika nVidia yanikela ngendalo yayo eyingqayizivele. I-TV-box nVidia Shield TV Pro 2019, kanye nokusebenza kokubuka okuqukethwe kwevidiyo ngekhwalithi ephelele, yakhelwe ukudala ukuncintisana kwezidudla zomdlalo.
Isiteshi esipholile iTechnozon sithumele ukubuyekeza okuhle kwevidiyo. Kuthinta ukwazana kokuqala, ukubuka kafushane kwedivayisi nokuhlolwa kokusebenza (inethiwekhi, imidlalo, okuqukethwe kwevidiyo). Zonke izixhumanisi zesiteshi se-Technozon (ukubuyekeza kanye nezitolo) thina, njengokwejwayelekile, sizishicilela phansi ekhasini.
I-TV-box nVidia Shield TV Pro 2019: imininingwane
Ukwenza kube lula ukuthi umfundi aqonde ukuthi umkhiqizo omusha uhluke kanjani kuzisombululo eziphezulu zaseChinese, sizokwenza ipuleti lokuqhathanisa. Mhlawumbe lokhu kuzosiza umthengi wesikhathi esizayo ngokukhetha kwebhokisi le-TV ngezidingo zabo.
Характеристика nVidia Shield TV Pro 2019 I-Beelink GT-King Pro UGOOS AM6 Pro
processor I-4xCortex-A53 @ 2,00 GHz
I-adaptha yevidiyo IGeForce 6 ULP (GM20B), 256 CUDA Cores IGPU Mali-G52 MP6 (850 MHz, 6.8 Gb / s) IGPU Mali-G52 MP6 (850 MHz, 6.8 Gb / s)
Ukunwetshwa kwe-ROM Yebo, i-USB Flash Yebo, amakhadi wememori aze afike ku-32 GB Yebo, amakhadi wememori aze afike ku-32 GB
operating system I-Android 9.0 I-Android 9.0 I-Android 9.0
Uxhumano olunentambo Yebo, RJ-45, 1Gbit / s Yebo, RJ-45, 1Gbit / s Yebo, i-1 Gbps RJ-45 port (802.3IEEE 10 / 100 / 1000)
Bluetooth I-Bluetooth 5.0 nge-LE Technology I-Bluetooth 4.1 + EDR I-Bluetooth 5.0 nge-LE Technology
I-Wi-Fi Signal Booster akukho akukho Yebo, i-antennas ye-2 yi-5db
Ukungena I-HDMI, i-2xUSB 3.0, i-LAN, DC I-HDMI, i-Audio Out (3.5mm), i-MIC, i-4xUSB 3.0, i-SD (ifinyelela ku-32 GB), iLAN, RS232, DC I-AV-out, AUX-in, microSD, LAN, 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0, HDMI 2.0, SPDIF, DC / 12V
Amakhadi wememori No Noma yimaphi amakhadi we-SD microSD 2.x / 3.x / 4.x, eMMC ver 5.0
4K ukweseka Yebo I-4Kx2K @ 60FPS, HDR Yebo I-4Kx2K @ 60FPS, HDR + Yebo I-4Kx2K @ 60FPS, HDR
Izindleko I-240-250 $ I-140-150 $ I-140-150 $
Ibhokisi eliphakeme le-TV noma i-console?
Ekuqaleni, i-TV-box nVidia Shield TV Pro 2019 ibekwe njengekhonsoli yomdlalo epulatifomu ye-Android. Konke ukuthungwa kuhloswe ukusebenza kahle kakhulu emidlalweni. Futhi ngokuthokozisayo, isimaphambili asinqunyelwe nakancane kuzicelo ze-Android. Iqiniso lonke ukuthi ibhokisi le-TV lingavula kalula amathoyizi avela emidlalweni ye-nVidia kuzilungiselelo eziphezulu. Yebo, yizo kanye ezisetshenziswa ama-gamers ekudlala kwikhompyutha noma kwi-laptop. UBubble ukhuluma ngalokhu ngemininingwane eminingi ekubuyekezweni kwakhe ngehora (ividiyo ngenhla).
Ngokuqondene nekhono leShield TV Pro lokudlala ividiyo ngefomethi ye-4K, nansi i-oda eliphelele. Ukuntuleka okuphelele kwe-throttling (ukupholisa okusebenzayo), ukusekela kwazo zonke izinhlobo zama-codecs wevidiyo, ukuqoshwa komsindo onamalayisense ngendlela efinyeleleka kalula. Futhi isixha sezinye izilungiselelo eziwusizo kumsebenzisi ekusebenzeni kwekhonsoli. Ukuphela kwento okufanele unake ngayo yintengo yebhokisi le-TV. Uma umthengi engahleleli “ukusebenzisa” amathoyizi we-nVidia opholile, kepha aphupha ngebhokisi le-omnivorous set-top box for 4K TV, ngakho-ke alikho iphuzu ekuthengeni iShield TV Pro.
I-Sniper Elite 5 Izidingo Zohlelo Lomdlalo
I-Call of Duty: Iphrojekthi ye-Aurora ku-beta